သားလေး နိုဝါအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတွေ ပြောလာတဲ့ ဇဏ်ခီနဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ
သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေး နိုဝါ အတွက် သူတို့ရင်ထဲက စကားတွေနဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့ကတော့ သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီတို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားလေး နိုဝါ ရဲ့အသက်(၈) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ သားလေး နိုဝါ အတွက် ဖခင်ဖြစ်တဲ့ ဇဏ်ခီက အခုလို မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်။
" Happy Birthday ပါ သားကြီး!!လူတိုင်းမှာ သူ့ခရီးနဲ့သူရှိတယ် ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်ဘာဖြစ်မလဲ၊ ဘာကခက်ခဲတယ် ဆိုတာ သိဖို့လိုတယ် ။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိစရာမရှိပါဘူး ။ မင်းအတားအဆီးများစွာကို ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့် လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်နဲ့ ဂရုဏာတွေ မလျော့အောင် သေချာလုပ်ပါ ။ သေးငယ်သော အရာများကို အသိအမှတ်ပြုပါ ။ အဲဒီ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ ဘဝတစ်ခု မင်းရရှိလိမ့်မယ် ။ ပြီးတော့.. ငါက မင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်း ဖြစ်မှာပါ ။ ငါနင့်ကို နှလုံးသားတစ်ခုလုံးနဲ့ချစ်တယ် Noah" ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ညနေ (၃) နာရီက သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
နိုဝါလေးရဲ့ နာမည်အရင်းကတော့ နိုဝါလင်းထက်ခီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ သားလေး နိုဝါအတွက် မေမေ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီကလည်း သားလေး နိုရာ အတွက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေး ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
" မေမေ့ရဲ့ Superman မျောက်ကလေးရေ...😁 Happy Birthday ပါ!! သားလေးစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဘဝကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်နော်။ Daddy and Mommy love you so much!! No matter what happens in life, we’ll always be there for you" ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့ မနက် (၈) နာရီကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ။ နိုရာ့ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားတွေကို Comment ကနေ တဆင့် ပြောခဲ့ကြပါသေးတယ်။
သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီတို့ ဇနီးမောင်နှံကိုတော့ ' ဥပါယ်တံမျဉ်' ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ အဓိက သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ' မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ' ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာ လည်း ပရိသတ်တွေက အားပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ တတိယမြောက်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီး ဖြစ်တဲ့' Now & Ever' ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုတွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ရရှိခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။